Samsung Galaxy Note N7000 4.1.2 XXLSA ကို Root လုပ်ခြင်း။
ပို့ရေးသားသူးပိုးဟပ် MMSD Fan Page မှာ ကိုပိုးဟပ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သေချာစမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်.. error တော့မရှိပါဘူးဗျာ.. အရင်ဆုံးဒီဖိုင်လေးတွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါဦးနော်.. PhilZ-cwm6-XXLSA-XJB-3.71.tar.md5 (UPLOAD BY ပိုးဟပ်) PhilZ-cwm6-XXLSA-XJB-3.71.tar.md5 (UPLOAD BY MMSD) Odin3-v1.85 (UPLOAD BY ပိုးဟပ်) Odin3-v1.85 (UPLOAD BY MMSD) အဲဒါတွေ ဒေါင်းလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ philz touch3recovery ထည့်ပါမယ်။ ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ odin ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် PDA ကိုနှိပ်ပြီး ခုနကဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ PhilZ-cwm6-XXLSA-XJB-3.71.tar.md5 ကိုရွေးပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် volume down+ power +home ကိုနှိပ်ပါ။ Warning […]
HTC Desire VC ကို Root လုပ်နည်း
Unlock BootLoader အရင်လုပ်ရပါမယ်…. ပြီးရင်တော့အောက်ကအဆင်တွေကိုလုပ်လိုက်ရင် Root ရပါပြီ။ လိုအပ်တာလေးအရင် Download လုပ်လိုက်ပါ.. HTC Desire VC Root ဒေါင်းပြီးရင်တော့ rar ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ… update.zip ကို SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ….. Desire VC recovery.rar ကို Extract ထပ်လုပ်ပါ… ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ…. Volume Down + Power ကို ဖိနှိပ်လိုက်ပါ….. Fastboot ကို ပါဝါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Com နှင့်ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။ 点我运行.bat ကို Run လိုက်ပါ.. Enter နှစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်…. ပြီးရင်တော့ Battery ဖြုတ်ပြီး Volume Down […]
Samsung Galaxy S3 i9300 4.1.1 Root လုပ်နည်း
ဒါကတော့ i9300 Galaxy S3 4.1.1 ကို Root လုပ်တဲ့နည်းပါ… လွယ်ပါတယ်… ရေးတဲ့ Developer တွေအတွက်တော့ခက်နေမှာပေါ့နော်……. 4.0.4 တုန်းကလိုပဲ Odin လိုပါတယ်…. Odin နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့သူတွေကတော့ ဒီ Root လုပ်တဲ့နည်းကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေမှာပါ…. လိုအပ်တာတွေအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ [email protected] [email protected] Password:phyochan ပြီးရင်တော့ Odin ကို Run လိုက်ပါ… PDA မှာ CF-Root-SGS3-v6.4.tar ကို ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ…. Download Mode ၀င်ရပါမယ်… Volume Down + Power + Home ကိုဖိနှိပ်လိုက်ပါ… ဒါဆို Download Mode […]
Galaxy S3 i9305 4.1.1 ကို Root လုပ်နည်း…
ဒါကတော့ S3 ကပဲ i9305 နဲ့လာတာတွေကို Root လုပ်နည်းပါ… About ဖုန်းမှာသေချာကြည့်ရပါမယ်…. i9300 လား i9305 လားဆိုတာကိုနော်.. သူနည်းလမ်းနဲ့လုပ်တာပဲစိတ်ချရပါတယ်… မှားလုပ်လိုက်လို့ Firmware လောက်ပဲပျက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. Boot ပါသေသွားရင်တော့ တန်ဖိုးလဲမနဲဘူးလေ….. ဒါကြောင့်သေချာလေးရေးပေးလိုက်တာပါ… လိုအပ်တာတွေ အရင်ဒေါင်းရပါမယ်… Odin3-v3.04MMSD.rar CWM-Root-i9305MMSD.rar ပြီးသွားရင်တော့ CWM + Root [email protected] ကိုဖြည်လိုက်ပါ။ SuperSU-MMSD.zip ကို SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ… ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ…. Volume Down + Power + Home ကို နှိပ်လိုက်ရင် Download Mode ၀င်လိုက်ပါ….. ပြီးရင် ကြိုးထိုးလိုက်ပါ.. အစိမ်းနုရောင်လေး Com မှာပေါ်မယ်…. […]
Lenovo A65 Root လုပ်နည်း….
Lenvo A65 ကို Root လုပ်နိုင်တာ သုံးနည်းလောက်ရှိပါတယ်.. SP Flash Tool နဲ့လုပ်တဲ့ နည်း, CWM ထည့်ပြီးလုပ်တဲ့နည်းနဲ့, Unlock Root နဲ့လဲရတက်ပါတယ်… ဒီနည်းကတော့ တစ်ခြားတစ်နည်းပါ…. လွယ်တော့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.. ပထမဆုံးဒါလေးအရင် Download လုပ်လိုက်ပါ။ [email protected] [email protected] (Mediafire) ပြီးရင်တော့ Extract လုပ်လိုက်ပါ… A65-Tools-v2.exe ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်…. Run ထားလိုက်ပါ… ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ… Computer ထဲမှာ Lenovo Driver သွင်းထားရပါမယ်… ပြီးရင်တော့ Fastboot ၀င်ရပါမယ်…. volume down key + menu key (far left) + Power ကို ဖိနှိပ်လိုက်ပါ […]
U8812D ကိုအလွယ်ဆုံး Root လုပ်နည်း
U8812D ကနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့သူကိုလုပ်တာပြသာနာတွေနဲ့ ကြုံနေရတဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်ဆုံးနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်… အဆင်ပြေမှာပါ။ ပထမဆုံးဒါလေးကိုအရင် Download လုပ်ရပါမယ်… U8812D Root.zip U8812D Root.zip ပြီးရင် Extract လုပ်လိုက်ပါ.. root_tools.exe ကို Run လိုက်ပါ…. ဖုန်းကိုဒီအတိုင်း USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ပြီးကြိုးထိုးရုံပဲနော်….. ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး Root ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ…. ပြီးရင် Reset ကျသွားပါလိမ့်မယ်… မကျရင် Reset ချပေးလိုက်ပါ.. ပြန်တက်လာရင်Root ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်….. အဆင်ပြေပါစေ…. Share
Galaxy Tab တွေကို Root လုပ်ရတာတော့မခက်ပါဘူး. အန္တရာယ်လဲကင်းလို့ လုပ်မဲ့သူတွေအဆင်ပြေမှာပါ။ ပထမဆုံးဒီဖိုင်လေးကိုအရင်ဒေါင်းပါ။ P6200 CWM + Root By www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar (Sugar Sync) P6200 CWM + Root By www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar (upload.net) P6200 CWM + Root By www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar ပြီးရင်တော့ rar ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ။ နှစ်ခုလုံးကို SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Power ပိတ်လိုက်ပါ။ Volume up + power နဲ့ Stock Recovery Mode ၀င်မယ်… Install zip from External […]
U8825D Root လုပ်ခြင်း
အရင်ဆုံး Bootloader Unload အရင်လုပ်ရမယ်… http://www.huaweidevice.com/cn/servicePolicy.do?method=toApplyUnlock ဒီကိုသွားလိုက်ပါ.. ဒါလေးတွေမယ်…. အမှန်ခြစ်ပြီးအနီရောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်အချက်အလက်တွေထည့်ရမယ်.. ပထမဆုံး ဖုန်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရပါမယ်။ ၁။ Serial Number ကြည့်ရမယ်။ ၂။ IMEiD (International Mobile Equiment Idenity) ကြည့်ရမယ်။ ၃။ product ID ကြည့်ရမယ်။ Serial Number ကိုဖုန်းကျောမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်ကိုကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ N5T4CB9261909742 MEiD ကို *#06#နှိပ်ပြီးကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ a0000036e0bb98 Product ID ကို Call log မှာ *#*#1357946#*#* ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ 32038913 တရုတ်လိုတွေရေးထားပါတယ်။လုပ်ရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကို ရေးပေးထားပါတယ်။ […]
C8950D ကို Root လုပ်လိုက်ရအောင်
ကဲ C8950D ကို Root ရအောင်ပေါ့နော်.. အရမ်းလဲမခက်ပါဘူး… Root လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်က လွယ်နေပါတယ်.. အရင်ဆုံး Bootloader Unload အရင်လုပ်ရမယ်… http://www.huaweidevice.com/cn/servicePolicy.do?method=toApplyUnlock ဒီကိုသွားလိုက်ပါ.. ဒါလေးတွေမယ်…. အမှန်ခြစ်ပြီးအနီရောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်အချက်အလက်တွေထည့်ရမယ်.. ပထမဆုံး ဖုန်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရပါမယ်။ ၁။ Serial Number ကြည့်ရမယ်။ ၂။ IMEiD (International Mobile Equiment Idenity) ကြည့်ရမယ်။ Serial Number ကိုဖုန်းကျောမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်ကိုကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ N5T4CB9261909742 IMEI/MEiD ကို *#06#နှိပ်ပြီးကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ a0000036e0bb98 တရုတ်လိုတွေရေးထားပါတယ်။လုပ်ရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကို ရေးပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံးစာကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ Email လိပ်စာထည့်ပါ။ ဥပမာ။ ။ […]
Galaxy nexes root
« Previous Page — Next Page » Like Us On Facebook! MMSD Group ကိုလာခဲ့ပါ။ © 2014 Myanmar Mobile Software Developer. WordPress Theme by ဖြိုးချမ်း.